६० वर्ष बित्दा पनि पूरा भएन कान्ति राजमार्ग - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
बैशाख १०, २०७५ 1842 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
तराईलाई काठमाडौंसँग जोडने वैकल्पिक सडकको रूपमा निर्माण भइरहेको कान्ति राजमार्गको काममा पुनः सुस्तता आएको छ । सरकारी निकायको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु र ठेकेदारको लापरबाहीले काम प्रभावित भएको हो ।
राजमार्ग निर्माणको ठेक्का सम्झौता सकिन ३ महिनामात्र बाँकी छ । अहिलेसम्म करिब ६५ प्रतिशतमात्र काम पूरा भएको छ । यो सडक निर्माण सुरु भएको झन्डै ६० वर्ष पूरा भइसक्यो ।
३ महिनामा लक्षित काम पूरा नहुने भएपछि सडक आयोजनाले म्याद थप्ने तयारी गरेको छ । ६ दशकदेखि अलपत्र सडकको कामले पछिल्लो समय गति लिएको थियो । अहिलेकै अवस्थामा निर्माण पूरा हुन अझ एक वर्ष लाग्ने देखिएको छ ।
सडक आयोजनाका अनुसार विभिन्न ठाउँमा १० किलोमिटर खण्डको ट्र्याक चौडा पार्ने काम अझै बाँकी छ । सडक फराकिलो बनाउन विष्फोटक पदार्थ नहुँदा समस्या थपिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
पटक–पटक ताकेता गरे पनि विस्फोटक पदार्थ उपलब्ध नभएको कान्ति राजमार्गका आयोजना प्रमुख देवेन्द्र शाहले बताए । उनका अनुसार राजमार्ग खण्डमा पर्ने रानीबास, काल्चे, मौरी भीर लगायत ठाउँ चौडा गर्न विस्फोटकको खाँचो छ ।
३ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको सडक निर्माणमा अहिलेसम्म १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ललितपुर खण्डमा २ किलिोमिटरबाहेक कालोपत्रे भएको छैन । मकवानपुर खण्डमा हालसम्म २० किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । ७९ किलोमिटर दूरीको सडक ललितपुर टिकाभैरब पुलदेखि मकवानपुर बुद्धचोकसम्म जोडिएको छ ।